Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Enyere paspọtụ na-anọpụ iche na nwoke na nwanyị na US
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • LGBTQ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Enyere paspọtụ na-anọpụ iche na nwoke na nwanyị na US.
Ozi a bịara ọnwa atọ ka Ngalaba Steeti nyere ndị America trans America nhọrọ nke ịgbanwe okike ha na paspọtụ ha na-enyeghị akwụkwọ ahụike iji gosipụta mgbanwe ha.
Ngalaba steeti US kwupụtara iwepụta paspọtụ na-anọpụ iche nwoke na nwanyị na Wednesde.
Ụfọdụ steeti US na-ahapụ ndị na-abụghị ọnụọgụ abụọ ka ha mata dị ka 'X' na akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ ụdị NJ ndị ọzọ.
NJ ndị na-anọpụ iche nwoke na nwanyị bụ naanị otu nkwa Joe Biden kwere ndị LGBT n'ụzọ mkpọsa ahụ.
The Departmentlọ Ọrụ US kwuputara na Wednesde na ọ ewepụtala paspọtụ na-anọpụ iche na nwoke na nwanyị mbụ.
Dị ka Ngalaba MbaOnye nkwuchite ọnụ Ned Price, US "na-aga n'ihu na-eme ihe iji gosipụta nkwa anyị n'ịkwalite nnwere onwe, ugwu na nha anya nke mmadụ niile - gụnyere ụmụ amaala LGBTQI+ US."
Ngalaba Mba Onye ọrụ gọọmentị kwuru na n'oge na-adịghị anya onye ọ bụla na-arịọ arịrịọ ga-enwe ike ịhọrọ 'X' kama nhọrọ nwoke ma ọ bụ nwanyị ọdịnala.
Akụkọ ahụ bịara ọnwa atọ ka nke ahụ gasịrị Ngalaba Mba nyere trans America nhọrọ nke ịgbanwe okike ha na paspọtụ ha na-enyeghị akwụkwọ ahụike iji gosi mgbanwe ha. Oge ahụ, Onye ode akwụkwọ steeti Tony Blinken kwuru na ndị ọrụ gọọmentị ka na-enyocha usoro kachasị mma maka nhọrọ na-abụghị ọnụọgụ abụọ.
Ụfọdụ steeti US na-ahapụ ndị na-abụghị ọnụọgụ abụọ ka ha mata dị ka 'X' na akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ ụdị ID ndị ọzọ, yana ọtụtụ mba ekwelarị nhọrọ nke nwoke na nwanyị atọ na paspọtụ. Otu n'ime ha bụ Argentina, Canada, na New Zealand, ebe ihe karịrị mba iri na abụọ na-enye ndị mmadụ ibe ha ma ọ bụ ndị na-abụghị ọnụọgụ abụọ paspọtụ nwoke na nwanyị atọ n'ọnọdụ ụfọdụ. A ga-eme ka nhọrọ a dị maka ndị niile na-achọ US na mbido 2022.
NJ ndị na-anọpụ iche nwoke na nwanyị bụ naanị otu nkwa Joe Biden kwere ndị LGBT n'ụzọ mkpọsa ahụ. Mgbasa ozi ya kwekwara nkwa ichebe "LGBTQ + ndị mmadụ site na ime ihe ike," ịgbasa nchedo iwu na ndị transgender site na ịgafe Iwu nha nhata, na inye ndị ntorobịa transgender ohere ịnweta ụlọ ịsa ahụ na ime ụlọ mkpuchi nke nhọrọ ha.
Ụgbọ elu EgyptAir laghachiri na Cairo ka achọtara ozi iyi egwu